सुन चाँदीको मूल्यमा बृद्दि
बैशाख २३ काठमाडौ । आइतबार सुनचाँदीको मूल्य बढेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार सुनको मूल्य प्रतितोला दुई सय तथा चाँदीको ५ रुपैयाँले बढेको छ। महासंघका अनुसार फाइन सुनको मूल्य तोलामा ५८ हजार ७ सय तथा स्टान्डर्ड
काठमाडौं – गृह मन्त्रालयको छानबिनको अनुसन्धान विशेष टोलीले ३८ क्विन्टल सुन तस्करी र सनम शाक्यको हत्याका मुख्य अभियुक्त चुडामणि उप्रेती (गोरे) भारत हुँदै तेस्रो मुलुक भाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । सुन तस्करी प्रकरण र
आज लामो दूरीमा कुनै पनि गाडी नचल्ने
यातायात व्यवसायीहरूले देशभर चल्ने लामो दूरीका सार्वजनिक यातायात बन्द गरेका छन्। सिण्डिकेट तोड्ने सरकारी निर्णयका विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको राष्ट्रिय यातायात व्यवासायी महासंघ आबद्ध व्यवसायीहरूले लामो दूरीमा चल्ने सवारीसाधन ठप्प पारेका हुन्। सार्वजनिक यातायात चलाउन
सुन प्रकरणमा सात अनुत्तरित प्रश्न
वैशाख २०, काठमाडौं । सुन प्रकरणमा सात अनुत्तरित प्रश्न आजको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । ३३ किलो सुन तस्करी र भरिया सनम शाक्यको हत्या प्रकरणमा ६ जना बहालवाला प्रहरी अधिकारीसहित ६३ जनाविरुद्ध अदालतमा अभियोग
हेर्नुहोस यसरी छिर्छ विमानस्थलबाट सुन
वैशाख २०, काठमाडौं | विमानस्थलबाट कसरी भित्रिन्छ सुन प्रश्नमा पूर्वएआइजी विज्ञानराज शर्माको जवाफ छापिएको छ । विमानस्थलमा प्रहरी मात्र होइन, भन्सार, राष्ट्रिय अनुसन्धान, अध्यागमनजस्ता संयन्त्र हुन्छन् । यत्रो सुन आउँदा तिनले के हेर्छन् ? त्यहाँ विभिन्न घेरा
आज सुन चाँदिको मूल्य कति ?
बेशाख १६ काठमाडौ – आज सुनको मूल्य प्रतितोला २ सय रुपैयाँले बढेको छ। शुक्रबार ५८ हजार ७ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन २ सयले बढेर ५८ हजार ९ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघकाले
आज केन्द्रीय बैंकले २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउँदै
बेशाख १२ काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार २० अर्ब रुपैयाँ बजारमा पठाउने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले रिपोमार्फत १४ दिनका लागि रकम बजारमा पठाउन लागेको हो । वैशाख १२ गते ३ बजे बोलकबोल
बेशाख १२ काठमाडौ । आज सुनको मूल्य प्रतितोला ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ। हिजो ५८ हजार ८ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुन बुधबार प्रतितोला २ सयले बढेर ५९ हजारमा कारोबार भएको छ। यो छापावाला सुनको मूल्य